IFoxconn iphinda ivule umzi-mveliso wayo eIndiya emva kokuba iApple "isohlwayo" | Ndisuka kuMac
IFoxconn iphinda ivule umzi-mveliso wayo waseIndiya emva 'kohlwaywa' kuka-Apple
I-Apple ifuna ukuxhomekeka kancinci eTshayina, kwaye kancinci kancinci "icebisa" ababoneleli bayo ukuba bavule izityalo ezitsha zemveliso kwamanye amazwe, anjengeIndiya. Foxconn, omnye wabadibanisi abaphambili be-Apple, ngokubambisana norhulumente waseIndiya, uvule iifektri ezintsha kweli lizwe, kodwa uye waba neengxaki ezinzulu kakhulu ngeemeko zempilo zabasebenzi bayo.
Urhulumente waseIndiya uzibophelele ekwakheni nasekugcineni amagumbi okulala kunye namagumbi okutyela ahlala amawakawaka abasebenzi kumzi-mveliso weFoxconn. Kodwa nyani iimeko ezisempilweni Kwezo ndawo zokhuselo, zachaswa esidlangalaleni kwinyanga ephelileyo, yamcaphukisa iApple kangangokuba yanyanzela uFoxconn ukuba avale isityalo de ingxaki isonjululwe. Kubonakala ngathi isohlwayo siye sasebenza.
IFoxconn ibihlanganisa i-iPhone 12 eIndiya ixesha elide, kwaye ngoku ibivavanya ukwenza oko ngeemodeli zamva nje ze-iPhone. iPhone 13. Kodwa uApple wagqiba kwelokuba ayeke ukuvelisa ngoko nangoko kumzi-mveliso wela lizwe ngenxa yeengxaki zempilo ezixelwe ngabasebenzi kulo mzi-mveliso.
Kwinyanga ephelileyo, i-arhente Reuters uthumele i- ingxelo apho wachaza iimeko ezingacocekanga abasebenzi bakwaFoxconn abahlala kuzo eIndiya. Baxinene kwizisele ezixineneyo, kumagumbi okutyela anokutya okonakeleyo, abanye belala phantsi, kumagumbi ahlala abantu abaphakathi kwabathandathu ukuya kwamashumi amathathu.
Phantse abasebenzi abangama-300 banxilile
Ngezo ntsuku, abasebenzi abangama-259 babandezeleka a ukunxila ngenxa yokutya okonakeleyo. Xa iindaba zavela, u-Apple wakhawuleza wanyanzela uFoxconn ukuba avale isityalo de zilungiswe zonke ezo meko zilusizi zabasebenzi basefektri. Isityalo esinabasebenzi abayi-17.000.
El rhu lumente yaseIndiya, ejongene nokwakhiwa kwezindlu zaba basebenzi, sele ithathe amanyathelo kwaye iza kwakha iindawo zokulala ezintsha. Kuqikelelwa ukuba kuya kuthatha iinyanga ezimbini okanye ezintathu ukuba bonke abasebenzi bahlaliswe kwindawo entsha.
Okwangoku, imveliso iqala kwakhona kwiveki ezayo ngabasebenzi abangaphezu kwekhulu. Kwaye yonke phantsi ulongamelo Apple, ukuze oku kungenzeki kwakhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IFoxconn iphinda ivule umzi-mveliso wayo waseIndiya emva 'kohlwaywa' kuka-Apple
IPodcast 13 × 16: Yintoni esiyilindeleyo kwi-Apple ngo-2022
I-Apple ikhupha ulwandiso lweShazam lweChrome kunye neMicrosoft Edge